အဆိုပါရာသီဥတုသည်အရာအားလုံးဖြစ်တည်မှုသို့ကြွလာ, ခဏနေဆဲ, ထို့နောက်ဖြစ်တည်မှုထဲကဖြတ်သန်း, အရာသီဥတုအရသိရသည်ပြန်ပေါ်လာသည့်အညီဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
vol ။5မေ, 1907 ။ အမှတ် 2
မွေးဖွားခြင်း - သေခြင်း - မွေးဖွားခြင်း။
မွေးဖွားခြင်းဆိုသည်မှာအခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သေခြင်းတရားသည်လည်းထိုနည်းတူဖြစ်၏။ ဤလောကသို့မွေးဖွားရန်သာမန်လူသေသည်သူလာသည့်ကမ္ဘာသို့သေရမည်။ ဤလောကသို့အသေခံခြင်းသည်အခြားသောကမ္ဘာသို့မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။
မရေမတွက်နိုင်သောမျိုးဆက်များသို့ခရီးစဉ်တွင်“ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်မှလာကြသနည်း။ ဘယ်ကိုသွားကြတာလဲ” သူတို့ကြားရသောတစ်ခုတည်းသောအဖြေမှာသူတို့၏မေးခွန်းများကိုသံယောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပိုမိုတွေးတောဆင်ခြင်တတ်သည့်စိတ်များမှအခြားမေးခွန်းနှစ်ခုက“ ငါဘယ်လိုလာရမလဲ။ ငါဘယ်လိုသွားရမလဲ။ ” ဤအရာသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစေသဖြင့်အကြောင်းအရာသည်အနားယူနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရိပ်အကဲကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်တစ်ဖက်တစ်ချက်သို့သတိပြုမိသူများသို့မဟုတ်အရိပ်အယောင်များကိုမြင်တွေ့ခဲ့သူများကနက်နဲသောအရာများကိုဖြေရှင်း။ သူ၏အနာဂတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုအတိတ်၏စံနမူနာဖြင့်ဖြေနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤဖော်ပြချက်များသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့နားထောင်ပြီးအတွေးမပါဘဲပယ်ချသည်။
နက်နဲသောအရာတခုကိုမဖြေနိုင်လျှင်ကောင်း၏။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းအမှောင်တွင်မနေထိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏အရိပ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့နှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမှန်တရား၏စိတ်ကူးရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ မည်သည့်နေရာသို့သွားကြသနည်း” ဟူသောရှုထောင့်ကိုကြည့်။ “ မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်နည်း” ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းမိနိုင်သည်။
“ ငါဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်မှာလဲ” နှင့်“ ကျွန်ုပ်မည်သို့လာမည်နည်း” နှင့်“ ကျွန်ုပ်မည်သို့သွားရမည်နည်း” ဟူသောအမွှာပူးတွဲမေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီးနောက်“ ငါဘယ်သူလဲ” ဟုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှိုးဆွပေးသောမေးခွန်းပေါ်လာသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုကိုသိသည်အထိနောက်တဖန်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ “ ငါ! ငါ! ငါ! ငါဘယ်သူလဲ? ငါဒီမှာဘာတွေလုပ်နေလဲ ငါဘယ်ကလာတာလဲ ငါဘယ်သွားမလို့လဲ ငါဘယ်လိုလာရမလဲ ငါဘယ်လိုသွားရမလဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အာကာသ၊ အချိန်ကာလသို့မဟုတ်ကျော်လွန်သောနေရာများသို့စဉ်ဆက်မပြတ်အစဉ်အမြဲရောက်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ”
သက်သေခံခြင်းနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရသူသည်မွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်သူသည်ဤလောကသို့ ၀ င်လာသည်၊ အနည်းဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်မွေးဖွားခြင်းနှင့်သူသည်သေခြင်းအားဖြင့်မြင်နိုင်သောကမ္ဘာမှထွက်ခွာမည်ကိုသိသည်။ မွေးဖွားခြင်းသည်ကမ္ဘာသို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ၏ဘ ၀ သို့ ၀ င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သေခြင်းသည်ကမ္ဘာမှထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းဟူသောစကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်မှာသက်ရှိများဖွဲ့စည်းထားသောခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ သေခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်း၏ယေဘုယျအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်မှာသက်ရှိများကိုညှိနှိုင်း။ အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရပ်စဲသည်။
ဤကမ္ဘာကြီးသည်ဤကမ္ဘာ၏လေထုနှင့်အတူထာဝရ ၀ တ္ထု၏အစက်များသည်အဆုံးမဲ့အာကာသအတွင်းမျောနေသည့်အစက်အပြောက်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၀ ိညာဉ်သည်ထာဝရကာလမှလာသည်၊ သို့သော်ကမ္ဘာ့သိပ်သည်းသောလေထုထဲတွင်ဖြတ်သန်းစဉ်အတောင်ပံများနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ ၎င်း၏အင်္ကျီနှင့်၎င်း၏လက်ရှိကိုယ်ခန္ဓာ၏ဇာတိပကတိအားဖြင့်လှည့်ဖြား, ၎င်း၏စစ်မှန်တဲ့နေအိမ်ကိုမေ့လျော့မြေကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိ, ကယခုနှင့်ဤနေရာတွင်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအပြင်ဘက်သို့ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အတောင်ပံကျိုးနေသည့်ငှက်တစ်ကောင်ကဲ့သို့၎င်းသည်အရှိန်မတက်နိုင်၊ ထို့ကြောင့် ၀ ိညာဉ်သည်ခဏသာနေပြီး၎င်းသည်အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကိုမမှတ်မိသော၊ နောင်ကာလကိုကြောက်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကွိုင်များမှအကျဉ်းသားတစ် ဦး ကိုဖမ်းဆီးထားသည်။
မြင်နိုင်သောကမ္ဘာသည်ထာ ၀ ရနှစ်ခုကြားထာဝရကာလ၌ကြီးမားသောပြဇာတ်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်မမြင်ရသောအရာများနှင့်မမြင်ရသောအရာများသည်ရုပ်ဝတ္ထုနှင့်မြင်နိုင်သော၊ မြင်သာထင်သာမရှိသောပုံစံမျိုးဖြင့်မမြင်နိုင်သောပုံစံမရှိသောအရာများဖြစ်လာပြီး၎င်းသည်ဘ ၀ ၏ပြဇာတ်ထဲသို့ဝင်လာသည်နှင့်အမျှဤနေရာတွင်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်နေသည်။
၀ မ်းဗိုက်သည် ၀ ိညာဉ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်သောခန်းမဖြစ်သည်။ စိတ်ဝိညာဉ်သည်အတိတ်၏မေ့လျော့နေသည်။ အဆိုပါငါးပိ, ဆေးသုတ်, ဝတ်စုံ, footlights နှင့်ပြဇာတ်ဝိညာဉျသည်ထာဝရ၌ဖြစ်ခြင်းကိုမေ့လျော့စေပြီး, ကပြဇာတ်၏ littleness ၌စွဲလန်းနှစ်သက်သည်။ စိုးလ်သည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စိတ်သက်သာရာရစေ။ သေမင်းတံခါးမှထာဝရကာလသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ၀ ိညာဉ်သည်လောကသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်အင်္ဂါများကို ၀ တ်ဆင်သည်။ တစ်ပိုင်းတစ်စကကမ္ဘာကြီးကိုစွန့်ခွာသွားဖို့ဒီဝတ်ရုံတွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဘဝသည် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားခြင်းသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့တက်လှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ သေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့မှထွက်ပေါ်လာသောအလိုဆန္ဒ၊ အတွေး (သို့) ဗဟုသုတ (♍︎ – ♏︎, ♌︎ – ♐︎, ♋︎ – ♑︎) ၏လောကသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။
unmasking ၏ဖြစ်စဉ်ကိုသိရန်, ငါတို့သည်ဖုံးကွယ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိရကြမည်။ ကမ္ဘာကြီးဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာသို့ကြွလာစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိရှိရန်သန္ဓေသားနှင့်သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုသိထားရမည်။
စုပေါင်းနေသည့်အချိန်ကတည်းကပကတိကမ္ဘာသို့မွေးဖွားသည်အထိပြန်လည်ဝင်စားသောအတ္တသည်၎င်း၏အင်္ကျီများနှင့်၎င်းနေထိုင်ရန်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းအတ္တသည်လူ့ဇာတိမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်တည်ဆောက်ပုံကိုသတိရှိရှိသို့မဟုတ်အိပ်မက်မက်နေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများမှတဆင့်မိခင်နှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည်။ ဤအခြေအနေများသည်အတ္တ၏စွမ်းအားနှင့်စွမ်းရည်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝိညာဏတစ်ခုစီသည်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသီးခြားကမ္ဘာနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုတွင်နေထိုင်သည်။ ၀ ိညာဉ်သည်ရုပ်ဝတ္ထုကိုယ်ခန္ဓာကိုသူ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းအတွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ပြီး၊ တည်းခိုခန်းအဆုံးသတ်သွားသောအခါ၎င်းသည်သေခြင်းနှင့်ဆွေးမြေ့ခြင်းဟုခေါ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဤသေခြင်းဖြစ်စဉ်အတွင်းနှင့်ပြီးနောက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာနှင့်မမြင်နိုင်သောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ရန်အခြားအလောင်းများကိုပြင်ဆင်သည်။ သို့သော်မြင်နိုင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်ဖြစ်စေ၊ မမြင်ရသောကမ္ဘာဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ဝင်စားသောအတ္တသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ်အပြင်သို့ဘယ်တော့မှရောက်သည်မဟုတ်ပါ။
အတ္တသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတု၊ မူလကမီးလောင်ကျွမ်းမှုများကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုပျော်ဝင်စေခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ပြိုကွဲစေခြင်းအားဖြင့်သာဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားသည်။ ဤရောဂါပိုးသည်ပကတိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သော်လည်းဝိညာဉ်လောက၏အတွင်း၌ရှိနေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောဤအပင်သည်ခန္ဓာကိုယ်၏သေခြင်းနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းဖြစ်စဉ်အတွင်းတောက်ပနေသည့်ကျောက်မီးသွေးလောင်နေသည်ဟုထင်ရသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏ဒြပ်စင်များသည်သူတို့၏သဘာဝရင်းမြစ်များသို့ပြေလည်သွားပြီးပြန်ဝင်စားသည့်အတ္တသည်၎င်း၏အနားယူရာကာလသို့ရောက်သောအခါပိုးသည်မီးမလောင်ဘဲမီးမငြိမ်းတော့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ပြာမှုန့်အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ cinder ဖြစ်ပုံရသည့်တိုင်အောင်အရွယ်အစားတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားသည်။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတ္တ၏ကြွင်းသောကာလတစ်ခုလုံးအတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်လောက၏မထင်ရှားသောနေရာတွင်ပြာအစက်အပြောက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ဤအနားယူချိန်သည်ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးကို“ Heaven” ဟုလူသိများသည်။ ၎င်း၏ကောင်းကင်ကာလပြီးဆုံးသွားပြီးအတ္တသည်ပြန်လည်ဝင်စားရန်ပြင်ဆင်နေသောအခါမီးလောင်နေသော cinder သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရှိများ၏အစွမ်းအဖြစ်ပြန်လည်တောက်ပလာသည်။ ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရ၎င်းသည်၎င်း၏အနာဂတ်မိဘများနှင့်သံလိုက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုသို့ယူဆောင်လာသည်နှင့်အမျှတောက်ပနေပြီးပိုမိုတောက်ပလာသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပင်ပေါက်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုစတင်ရန်အချိန်ကုန်လာသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏အနာဂတ်မိဘများနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသို့ ၀ င်လာသည်။
လူသား၏အစောပိုင်းအဆင့်များ၌နတ်ဘုရားများသည်ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်လူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာမြေကိုလှည့်လည်ခဲ့ပြီးလူတို့အားနတ်ဘုရားများ၏ဥာဏ်ပညာဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်များတွင်လူသားများသည်အချို့သောအချိန်ကာလများနှင့်သတ္တ ၀ ါများကိုမွေးဖွားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာစုစည်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်များတွင်လူ့ဇာတိခံယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သောအတ္တနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရမည့်အတ္တများအကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ အတ္တသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ဖြစ်၍ ဖြစ်လိုသောဆန္ဒရှိသည့်အခါ၎င်းသည်လူ့ဇာတိနှင့်ဆိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်နေထိုင်သောမိမိ၏ကြင်နာမှုနှင့်အမိန့်များအားတောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ချဉ်း ကပ်၍ ခန္ဓာကိုယ်မမွေးဖွားမီအထိပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤပြင်ဆင်မှုတွင်အချို့သောလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုနှင့်ဘာသာရေးအခမ်းအနားများပါဝင်ပြီး၊ သူတို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းသမိုင်းကိုပြန်လည်ပြဌာန်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်စကြဝuniversalာတစ်ခုလုံး၏စိုးလ်လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ဘုရားများအဖြစ်ပြုမူရမည်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့သိသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုလိုအပ်သည့်သန့်စင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းပြီးနောက်လူ့ဇာတိကိုဖော်ပြရန်အတ္တကသတ်မှတ်ထားသောအထူးသဖြင့်အချိန်နှင့်ရာသီတွင်တိုးပွားလာသည့်စက္ကမင်မင်္ဂယူနီဖောင်း၏ဓမ္မဓလေ့ထုံးစံကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါတစ် ဦး ချင်းစီ၏အသက်ရှုခြင်းသည်မီးလျှံကဲ့သို့သောအသက်ရှူခြင်းထဲသို့ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ copulative union ၏ထုံးတမ်းစဉ်လာအတွင်းအနာဂတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏တောက်ပသောအစွမ်းသည်အတ္တစိတ်၏ ၀ ိညာဉ်နယ်ပယ်မှထွက်ခွာသွားပြီးသက်ရှိများ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုထဲသို့ ၀ င်သွားသည်။ ထိုရောဂါပိုးသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ထင်မြင်ချက်ကိုယူသောအခါ၎င်းသည်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း၏အလောင်းများကို ဖြတ်၍ လျှပ်စီးများကဲ့သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ထို့နောက်မိခင်၏အမိဝမ်းထဲ၌ဗဟိုပြုကာလိင်ခြားသောပိုးမွှားနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းစေသည့်နှောင်ကြိုးဖြစ်လာသည်။ တစ် - impregnated Ovum ။ ထိုအခါအတ္တ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာဖြစ်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဤသည်မှာလူသားတို့အားဥာဏ်ပညာကိုအုပ်ချုပ်သည့်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါကလေးမွေးဖွားခြင်းသည်ကလေးမွေးဖွားခြင်းဝေဒနာများမပါရှိခဲ့ဘဲကမ္ဘာပေါ်ရှိသတ္တ ၀ ါများအနေဖြင့် ၀ င်လာရမည့်သူများကိုသိရှိကြသည်။ အခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
တပ်မက်ခြင်း၊ လိင်ခြင်း၊ လိင်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ ရန်ငြိုးထားခြင်းတို့သည်ယခုအချိန်တွင်လိင်မှုကိစ္စကိုလိုလားတောင့်တသောလူ့အုပ်စိုးရှင်များဖြစ်သည်။ ဤအလေ့အကျင့်များအတွက်မလွှဲမရှောင်အဖော်များမှာလျှို့ဝှက်ခြင်း, ပရိယာယ်, လိမ်လည်မှု, မှားယွင်းသောနှင့်သစ္စာဖောက်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးအတူတကွကမ္ဘာ့စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ ဖျားနာမှု၊ ရောဂါ၊ ရောဂါဆိုး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ အဝိဇ္ဇာ၊ ဆငျးရဲခွငျး၊ မနာလိုမှု၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းနှင့်သေခြင်း။ ငါတို့လူမျိုး၏အမျိုးသမီးများသည်မွေးဖွားခြင်းတွင်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသည်သာမကလိင်ကိစ္စနှစ်ခုစလုံးသည်သူတို့၏ထူးခြားသောရောဂါများကိုခံစားကြရသည်သာမကမွေးဖွားစဉ်အတောအတွင်းတူညီသောအပြစ်များကိုကျူးလွန်မိသောအတ္တများသည်ကြီးထွားလာသောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ (ကြည့်ပါ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ စကားလုံး, Vol ။ 5, အမှတ် 1, p.97 ။)
၀ ိညာဉ်လောက၏မျက်မြင်မရရောဂါသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့်အညီဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်ရှေးဟောင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ယောက်ျား၏ရောဂါနှင့်အမျိုးသမီး၏ရောဂါပိုးများသည်မမြင်ရသောအပင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အညီတည်ဆောက်သောတက်ကြွ။ တက်ကြွသောစွမ်းအားများဖြစ်သည်။
သို့သော်မျက်မြင်မရသောရောဂါသည် ၀ ိညာဉ်လောက၏နေရာတွင်ရှိနေသော်လည်း ၀ ိညာဉ်လောကနှင့်မကွာပါ။ ၀ ိညာဉ်လောကမှထွက်ခွာသွားသည့်အခါတောက်ပနေသောမျက်မြင်မရသောပိုးမွှားသည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ လူ့ဇာတိသဘောသဘာဝအရဤလမ်းကြောင်းသည်တောက်ပနေသဖြင့်သို့မဟုတ်သဲသဲကွဲကွဲသဲလွန်စဖြစ်နေသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသည်ပြုတ်ကျနေသောမမြင်ရသောရောဂါပိုးကို ၀ ိညာဉ်လောကနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောကြိုးဖြစ်လာသည်။ မမြင်ရသောရောဂါပိုးကိုမိခင်၏စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောကြိုးသည်အိတ်ထဲရှိသုံးချောင်းတွင်ကြိုးလေးချောင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အတူတူသူတို့တစ် ဦး ကြိုးအဖြစ်ပုံရသည်; အရောင်မှာမူမှိုင်း၊ ခဲသောခဲမှသည်တောက်ပသောရွှေအရောင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဤကြိုးသည်သန္ဓေသားထံသန္ဓေသားထံအကျင့်စာရိတ္တ၏စွမ်းအားများနှင့်သဘောထားများအားလုံးကိုကူးစက်စေပြီး၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးမျိုးစေ့များ (စကန်ဒါး) ကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှအသီးများသီးရန်အတွက်သန္ဓေသားထံပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤအသဘောထားတွေ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့ရာနှစ်ဆယ်ကိုနေကြသည်။
ကြိုးကြိုးကိုဖွင့်ထားသည့်ကြိုးတန်းလေးခုသည်သန္ဓေသား၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ပုံစံပြုရန်စုစုပေါင်းအရာဝတ္ထု၊ နက္ခတ်ဗေဒင်၊ သက်ရှိအရာများနှင့်ဆန္ဒကိုဖြတ်သန်းသည့်လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ Strand လေးခုကိုပတ် ၀ န်းကျင်သုံးခုလုံးမှတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်၏မြင့်မားသောအရာများဖြစ်သောအရိုးများ၊ အာရုံကြောများနှင့်ဂလင်းများ (မန္န)၊ တွင်းခြင်ဆီ (buddhi) နှင့် virile နိယာမ (atma) တို့၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းများ (sthula sharira)၊ အသားတစ်သျှူး (linga sharira)၊ သွေး (prana) နှင့်အဆီ (kama) တို့၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စသည်မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပြီးအနည်ကျသည်နှင့်အမျှမိခင်တွင်ထူးခြားသောထူးခြားသည့်ခံစားချက်အချို့ရှိကြသည်။ ဥပမာ - အချို့သောအစားအစာများ၊ ရုတ်တရက်စိတ်ဓါတ်များနှင့်ပေါက်ကွဲထွက်မှုများ၊ ထူးဆန်းသောစိတ်ခံစားချက်များနှင့်တောင့်တမှုများ၊ ဘာသာရေး၊ အနုပညာ၊ နှင့်သူရဲကောင်းအရောင်။ ဤအဆင့်တစ်ခုစီသည်အတ္တ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်မိခင်မှတစ်ဆင့်သန္ဓေသား၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
ရှေးအချိန်ကဖခင်သည်သန္ဓေသား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အရေးအပါဆုံးအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့ပြီးမိခင်ကဲ့သို့ပင်ဤအလုပ်အတွက်ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်အချိန်များတွင်ဖခင်၏သန္ဓေသားနှင့်စပ်လျဉ်း။ လျစ်လျူရှုခံရသည်။ သဘာဝဗီဇမှတစ်ဆင့်သော်လည်းမသိဘဲသူသည်သန္ဓေသား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်သူမ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောသဘာဝကိုအပြုသဘောဖြင့်ပြုမူဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မှန်သောကျမ်းဂန်များနှင့်စကြာဝogာပေါင်းစုံကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုသည်၎င်း၏တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်းတွင်ခြောက်ရက်အတွင်းကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သန္ဓေသား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ပြီးစီးပြီးနောက်လူနှင့်သတ္တမနေ့တွင်ဘုရားသခင်၊ ဘုရားသခင်၊ တည်ဆောက်သူများသည်သူတို့၏အလုပ်မှအနားယူခဲ့သည် သူ၏တီထွင်ဖန်တီးသူများ၏ပုံသဏ္inာန်ကိုခံယူခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူသား၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးအတွက်သဘာဝအလျောက်သက်ရှိအင်အားနှင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသတ္တဝါများသည်၎င်းတို့တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အစိတ်အပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းကိုဖျော်ဖြေဖို့လူ့ဇာတိအားဖြင့်မှာထားတော်မူသော function ကို၏သဘောသဘာဝကိုတုံ့ပြန်ရပေမည်။
ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်သဘာဝစွမ်းအားများကိုဆွဲဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်အသည်းအသန်လုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါပါရမီအသုံးပြုသည်အတိုင်းအာဏာကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ လူသားသည်knowledgeကန်အမှန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းသည်သူ၏အသိပညာ၊ ယုံကြည်မှု၊ ပုံသဏ္makingာန်နှင့်အလိုတော်အရခေါ်ဆိုနိုင်သည့်မိုက်ခရိုစကောဖြစ်သည်။
သန္ဓေသားလောင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ခုနစ်ဆခွဲခြားမှုအတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤသည်စိတ်ဝိညာဉ်၏နိမ့်ဆုံးကမ္ဘာသာ။ သို့သော်အတ္တသည်လူ့ဇာတိမဖြစ်သေးပါ။
သန္ဓေသားသည်စုံလင်ပြီးအနားယူပြီးနောက်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှောင်မိုက်ကမ္ဘာ၊ ဒီသန္ဓေသားသေတာဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလင်းလောကထဲကိုမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ရှူခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်းနှင့်အော်ဟစ်ခြင်းတို့ကြောင့်အသက်ရှူခြင်းအားဖြင့်အတ္တသည်ယင်း၏လူ့ဇာတိကိုစတင်သည်။ ၎င်းသည်မိခင်၏စိတ်ဝိညာဉ်စိုးလ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှမွေးဖွားလာသည်။ အတ္တသည်လည်း၎င်း၏ကမ္ဘာမှသေ။ ဇာတိလောကထဲသို့မွေးဖွားလာသည်။